‘पाल्पा’ आफंैमा प्रकृतिले सजिएको सुन्दर बगैचासरी छ । लाग्छ प्रकृतिले दिनुपर्ने सबै सुन्दरता अञ्जुलीभरी ल्याएर त्यहाँ खन्याइदिएकी छिन् । प्राकृतिक शीतलता मनुस्यका लागि कहिल्यै नमेटिने प्यास हो । शरीरलाई पानीको तिर्खा लागेसरी हरियालीको प्यास मान्छेलाई लागिरहन्छ । काठमाडौंजस्तो भीडभाड, उकुसमुकुस, ठेलमठेल र प्रदूषणयुक्त सहरको परिवेशमा बस्ने हरेक नेपालीलाई शीतलताको प्यास हुन्छ नै । त्यो मेटाउने वातावरण दिन्छ पाल्पाको हरियालीले । त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले दृश्यप्यास नमेटुञ्जेल हरियालीसँग रमाउन पाउँछन् । पाल्पाको प्राकृतिक सुन्दरतामाथि अर्को शृङ्गार छ ‘रानीमहल’ अर्थात् नेपाली ‘ताजमहल’ । यो मानवनिर्मित हो, तर लाग्छ प्रकृतिकै उपहारजस्तो । चारैतिर पहाडले घरिएको कालीगण्डकी र बराङ्दी नदीको संगमस्थलमा अवस्थित छ रानीमहल । नदीको तटमा निर्मित त्यो नेपाली ताजमहल भारतको आग्रास्थित ताजमहलभन्दा कयौं अनुपम लाग्छ । कमी छ त केवल प्रचारप्रसारको ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको दशौं केन्द्रीय पूर्ण बैठक गत भदौ २९ गते रानीमहलमा बस्यो । पाल्पा तानसेनबाट करिब चारकोस टाढा रहेको रानीमहलको पहिलोपल्ट अवलोकन गर्ने अवसर त्यसैले जुराइदियो । पाल्पाको बतासेडाँडाको चिसो बतासको शीतलता त यसअघि नै पटक पटक महसुस गरिएकै थियो । तर रानीमहलको दृश्यपान गर्न पाइएको थिएन । बैठकले त्यो अवसर जुराइदियो । त्यहाँ पुग्दा महासङ्घ पाल्पाका पूर्वअध्यक्ष भगवान् भण्डारी र वर्तमान अध्यक्ष राजेश अर्यालसहितको टोली स्वागतका लागि तैनाथ थियो । रानीमहलमा फूलमाला, पाल्पाली ढाकाटोपी र इष्टकोटको स्वागतले मनलाई फुरुङ्गै बनायो । लाग्यो, कुनैबेला जर्नेल खड्ग शमशेरले त्यसरी नै रानी तेजकुमारीलाई कुनै महलमा स्वागत गरेका थिए होलान् । तर दुर्भाग्य ! खड्ग शमशेरले नेपाली ताजमहल त बनाए, त्यसमा रानीलाई स्वागत गर्न पाएनन् । रानीकै सम्झनामा त्यो रानीमहल वि.सं. १९५० मा निर्माण गरेका थिए । रानीको देहावसानपछि भावविह्वल बनेका खड्ग शमशेरले सो महल बनाएर आफ्नो मनको पीडा र उकुसमुकुसलाई शान्त पारेका रहेछन् ।
नेपाली ताजमहलको नामले परिचित रानीमहलमै पहिरो गएर कुरूप बनाएको समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन प्रसारण भएको थियो । समाचारले मनलाई अलि खिन्न बनाएको थियो । त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो केही देखिएन । महलको पूर्व र पश्चिमपट्टिको डाँडामा ठूलो पहिरो गएको रहेछ । त्यसैको दृश्य देखाएर रानीमहल पुरिएको मिथ्या समाचार आएको रहेछ । पाल्पा पुग्दा स्थानीयसँग पहिलो जिज्ञासा थियो । ‘रानीमहल पुरियो रे त हो ?’ कतिले जानीनजानी ‘समाचारले त्यस्तै भन्छ’ भने कतिले ‘गएको छैन थाहा भएन’ भने । मनमा झन् कौतुहल मच्चियो । तस्विरमा रानीमहल देखिएको भए पनि प्रत्यक्ष त्यहीँ गएर अवलोकन गरिएको थिएन । त्यसैले कस्तो होला नेपाली ताजमहल ? कस्तो होला खड्ग शमशेरको रानीमहल ? जिज्ञासाको पोको मनभरि थियो । रानीमहलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पाएपछि जिज्ञासाको भारी हल्का भयो । दृश्यप्यास नमेटुन्जेल करिब छ घण्टासम्म त्यही महलमै बिताइयो । उल्टाइपल्टाई थरिथरिका तस्विर कैद गरियो । क्यामेराको मेमोरी नसकिँदासम्म ‘सेल्फी’ हानियो ।
धीर शमशेरका १७ भाइ छोरामध्येका वीर शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा खड्ग शमशेर कमाण्डर इन चिफ तोकिए । अठार महिनापछि उनी पदच्यूत गरिए । निर्वासित जीवन जिउन पाल्पा झरे । पछि उनलाई वि.सं. १९४५ मा पश्चिम नेपालको रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाग्लुङ र पर्वतको जिम्मेवारीकासाथ पाल्पाको गौंडामा पश्चिम कमाण्डरको पुनः जिम्मा दिइयो । सोहीबेला वि.सं. १९४९ मा रानी तेजकुमारीको कालगतिले मृत्यु भयो । मृत्युको अन्तिम क्षणमा खड्ग शमशेरले रानीलाई उनको सम्झनामा भारतको आग्राजस्तै ताजमहल निर्माण गरी स्मृतिलाई ताजै राख्ने वचन दिएका रहेछन् । वचनअनुसार उनले बेलायतबाट इन्जिनियर झिकाएर रानीमहल निर्माण गर्न लगाए । त्यसरी निर्माण भयो ‘रानीमहल’ अर्थात् नेपाली ताजमहल । करिब साढे पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित रानीमहल पाल्पाको तानसेन बजारबाट १३ कि.मि. मात्र टाढा छ ।
रानीमहलमा २४ कोठा, २ पोखरी, मन्दिर, बगैचा, पाटी, घोड–तबेला र भक्तजन बस्ने कुटी समेत निर्माण गरिएको छ । मानववस्तीभन्दा टाढा रहेको रानीमहलभित्र बहुमूल्य सामानहरू जडित भए पनि संरक्षणको अभावमा अहिले बहुमूल्य सामानहरू चोरी भइसकेका छन् । रानीमहलकै तलबाट सुसाउँदै बग्ने कालीगण्डकीको पवित्र पानी छोए मात्र पवित्र भइन्छ भन्ने भनाइ रहँदैआएको छ । बौघागुम्हा २, पाल्पामा पर्ने रानीमहलका हेरालु ओमप्रसाद भट्टराईकाअनुसार पहिले त्यहाँ बहुमूल्य भाँडा र शृङ्गारका सामान थिए । पछि त्यसको संरक्षण हुन नसक्दा सामानहरू चोरी भए । कतिपय सामान फुटे, कति गले ।
रानीमहल पर्यटकीय हिसाबले सम्भावनाले भरिएको छ । तर महलको पुनर्निर्माण र संरक्षणको अभाव प्रस्ट महसुस हुन्छ । रानीमहलका हेरालु भट्टराईकाअनुसार दैनिक एक–डेढसय जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउँछन् । प्रायः प्रेमजोडीको मनजोड्ने रोजाइ स्थलको रूपमा रानीमहल रहेको छ । साना जीप र मोटरबाइकबाट घण्टाभरमै सजिलै पुग्नसकिने रानीमहलको सौन्दर्य र त्यहाँको प्राकृतिक मनोरमले युगलजोडी र पर्यटकको मनलाई सजिलै लोभ्याउँछ । यस्तो सुन्दर ठाउँको दृश्यावलोकनका लागि राज्यले उचित प्रबन्ध र महलको संरक्षण भने गर्न सकेको छैन ।
रानीमहलका भित्ता चर्किएका छन् । ०७२ सालको भूकम्पको झट्का महलमा निकै जोडले प¥यो । भट्टराईकाअनुसार भक्त र भक्तिनीहरूको भागाभाग भयो । तथापि महललाई भूकम्पले खासै ठूलो क्षति गरेन । भित्ताहरू ठाउँ–ठाउँमा भत्किएका छन् । माथिल्लो सिलिङमा बिछ्याइएका काठका फल्याक र प्लाइउड उक्किएका छन् । भित्ता र खम्बाहरूमा चिरा परेका छन् । तर त्यसको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । टालटुल गरिएको छैन । महलमा परेका चिराबाट वर्षाको पानीले झन् दाग लगाइदिएको छ । त्यसले महलको सौन्दर्यलाई घटाएको छ । पुनर्निर्माण र शृङ्गारमा राज्यका स्थानीय निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
रानीमहलको जीर्णोद्वार, वरिपरि उम्रेका झारको सरसफाइ, हरियो बोटबिरुवा, फूल रोपेर महललाई थप सुन्दर पार्न सकिन्छ । महल परिसरमा निर्मित दुईवटा पोखरीको सरसफाइ हुन सकेको छैन । महल हेरालु उचित प्रबन्ध हुन नसक्नु, सरकारको लगानी नबढ्नु र त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न नसक्नु राज्यकै कमजोरी हो । त्यस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रलाई जोगाएर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी राज्यको आम्दानीको स्रोतको रूपमा त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
पाल्पाको तानसेन बजारबाट रानीमहल खासै टाढा छैन । तर पनि त्यहाँ पुग्न निकै सास्ती खेप्नुपर्छ । वर्षायाममा त ठाउँ ठाउँमा पहिरो, हिलो र खाल्डाखुल्डीले झन् समस्या थपिदिन्छ । वर्षाभरी त्यहाँ पुग्नेको संख्या निकै कम हुनेगर्छ । बाटोमा ग्राभेलसमेत पर्न नसक्दा र कच्ची बाटोले साना गाडी, मोटरबाइकसमेत बाटामा घरीघरी फस्नेगर्छ । गाडीमा सवार आफैले धक्का मार्दै रानीमहल पुग्नुपर्ने र फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । ठाउँ–ठाउँमा झरना र सानातिना पानीको मुहानले बाटामा खाल्डाखुल्डी र हिलाम्य बनाएको छ । पानीको सही निकास छैन । वर्षायामभरी आकाशमा बादल हेर्दै रानीमहलको अवलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आकाशमा कालो बादल मडारियो कि रानीमहलबाट टाप थोक्नुपर्छ पर्यटकलाई । पैदल जाँदा करिब तीनघण्टा लाग्ने र गाडीमा करिब डेढ घण्टा लाग्ने कच्ची बाटोले त्यहाँ पुग्नेलाई घरीघरी बाटोले सम्झाइरहेको हुन्छ ।
रानीमहल पुग्ने बाटोको स्तरोन्नति गर्नसके त्यहाँ पुग्ने यात्रुलाई थप सहज हुनसक्छ । रानीमहलसम्म पुग्ने अर्को उपाय केबलकार निर्माण हो । त्यसले सौन्दर्यलाई थप सुन्दर बनाउनेछ । पर्यटकलाई लोभ्याउनेछ । राज्यको ध्यान त्यता पुग्नसके पाल्पाको थप पर्यटकीय विकास सम्भव हुन्छ ।